Degmadda Tibro waxay qaaday talaabooyin lagu yaraynayo khatarta faafidda fayraska Corona. - Tibro Kommun
Degmadda Tibro waxay qaaday talaabooyin lagu yaraynayo khatarta faafidda fayraska Corona.
Degmadda Tibro waxay gaadhay go’aano dhowr ah oo lagu yaraynayo faafidda fayraska Corona iyo sidii looga ilaalin lahaa inay qaadaan dadka waayeelka ah iyo dadka xanuusanaya.
Waxa la mamnuucay soo booqashadda hoyga ay dagan yihiin ee lagu daryeelo dadka waayeelka ah iyo hoyga ay si ku meel gaadha u degen yahiin ee lagu daryeelo wayeelka.
Waa mamnuuc in lasoo booqdo hoyga lagu daryeelo dadka wayeelka ah ee dagmadu leedahay iyo xataa goobahayaga ay dadka waayeelka ahi si ku meel gaadha u dagan yihiin. Taasi macnaheedu waa inaanad soo booqan karin qof aad saxiib tihiin ama qof qaraabadaada ka mida oo goobahaasi hada dagan.
Marka kaliya ee laga dhaafayo qofka mamnuucidda waa hadii ay dhacdo arin khatar ah tusaale ahaan hadii qof sii dhiman rabo. Qofka madaxda ka ah goobtaasi ayaa go’aanka iska leh in booqashadda la ogolaado iyo inkale. Waxaad lasoo xidhiidhi kartaa qofka madaxda ka ah goobta degaanka adiga oo soo wacaya lambarka degmadda Tibro lagala soo xidhiidho oo ah 0504-180 00. Hadii aad u baahato ka dalbo qof aad saxiib tihiin ama qof qoyskaaga kamida oo yaqaana luuqada iswiidhishka inuu ku caawiyo si aan u wada hadalo.
Lama ogola in ay markaliya wada yimaadaan dhawr qof oo wada socda hadii lagaa dhaafo maamnuucidda booqashadda oo laguu ogolaado inaad soo booqato goobahaasi. Lama ogola inaad dhex soc socoto qaybaha kala duwan ee deegaan kaas ee waxaad joogaysa qolka qofka aad soo booqatay oo kaliya. Ka dheerow dadka kale oo masaafad fiican ha idiin dhaxayso. Hadii aad jiran tahay ama aad dareemayso xataa inyar calaamaddaha hargaba waxa kula gudboon inaad guriga joogto.
Booqashadda gacanhayaha xafiiska adeega bulshadda
Si looga hortago faafida cudurka ayaay degmadda Tibro joojisay booqashadda iyo la kulanka dadka marka ay noqoto xafiiska adeega bulshadda ama xafiiska caydha wakhtiga xaadirka ah ee lagu jiro. Arintani waxay khusaysa dhamaan dadka oo dhan taasi oo macnaheedu yahay inaanad xafiiska iska soo booqan karin ee waa inaad balan samaysataa marka hore.
Hadii aad u baahan tahay inaad la kulanto qof gacan haye/gacan yare ah waa inaad balan ka samaysataa adiga oo wacaya goobta lagala soo xidhiidho degmadda Tibro ee tilifoon nambarka 0504-180 00. Usheeg waxa aad rabto inaad ka hadasho si qayb sax ah laguugu gudbiyo. Hadii aad u baahato ka dalbo qof aad saxiib tihiin ama qof qoyskaaga kamida oo yaqaana luuqada iswiidhishka inuu ku caawiyo si aad balan u samaysato oo una sheeg inaad u baahan tahay turjuban wakhtiga booqashadda laguu qabto.
Hadii aad jiran tahay ama xanuusanayo lama ogola inaad soo booqato xafiiskayaga. Lama ogola xataa hadii uu ku hayo hargab fuduud inaad nasoo booqato ee hadii aad haysatay wakhti balan ah waa inaad bajisa.
Hadii aad u baahan tahay in cunto laguusoo adeego
Degmadda Tibro waxay ka wada shaqaynayan arimahan kiniisaddaha iyo jaaliyadaha si ay u caawiyaan dadka wayeelka ah ee da’doodu ka weyn tahay 70 jir ama dadka khatar ugu jira inuu xanuunku dhibaato u geysto una baahan in cunto losoo adeego oo guriga loogu keeno. Caawimaadan waxa loogu talo galay qofka aan lahyn dad qoyskiisa ka mida ama saaxiibo ama dadkale oo ay is yaqaanan oo arintan ka caawin kara. Lacagta cuntadda laguugu soo gaday waxaad ku bixinaysa biil lagu soo dirayo marka cuntada laguu keeno kadib.
Waxaad kala xidhiidhaysa dadka kaa caawinaya soo adeega cuntadda ”mathjälpen” telefoon lambarka 0766 98 62 77. Hadii aad u baahato ka dalbo qof aad saxiib tihiin ama qof qoyskaaga kamida oo yaqaana luuqada iswiidhishka inuu ku caawiyo si aad balan u samaysato.
Waxa kula gudboon inaad samyso hadii aad xanuusanayso
Hadii aad qabto qufac ama calaamaddaha kale ee lagu yaqaano hargabka ha u imanin rugta caafimaadka/vårdcentralen si toosa ee marka hore soo wac. Hadii xanuun deg degi ku qabto wac gargaarka deg dega/SOS Alarm 112. Wixii macluumadda ee inta dheer ka akhriso boga ay SOS Alarm ku leeyihiin internatka.
Hadii aad u baahato inaad lasoo xidhiidho goobaha daryeelka cafimaadka marka hore waxaad soo wacaysa rugta cafimaadka ee aad ka tirsan tahay ama waxaad wacaysa goobta talo bixinta arimaha caafimaadka 1177 halkaasi oo lagugu siinayo talo bixin ku saabsan arimaha caafimaadka oo af soomaali ah si aad u hesho talo bixinta af soomaaliga ah waxaad wacaysa telefoon lambarka 0771-11 77 91. Hadii aanad luuqadda iswiidhishka garanaynin oo aad caawimo u baahato waxaad waydiisata qof aad saxiib tihiin ama qof qoyskaaga ka mida si aad wakhti balana uga samaysato rugtaadda caafimaadka ama appka telefoonka/vårdapp. Ka dalbo in turjubaan lagu qabto.
Marka aad ku imanayso rugta caafimaadka balan aad hore usii samaysatay waxa lagaa rabaa inaad xaddidan tirada ehelkaaga kula socda.
Warbixin dheeraada waxaad ka heli kartaa boggaga hey’adaha dawliga ee iswidhishka.
Sidan ayaad iskaga ilaalin kartaa inaad qaado xanuunka – krisinformation.se
Warbixin qoraala oo ay soo saartay hey’adda caafimaadka dadweynaha oo ku saabsan sida aad iskaga ilaalin lahayd xanuunkan adiga iyo dadka kalaba
Filim ku saabsan sida aad iskaga ilaalin lahayd xanuunkan adiga iyo bulshadda kalaba kala soco informationsverige.se
Warbixin ka hadlaysa fayraska Corona oo ay soo jeedinayaan, hogamiyayaasha/culimadda diimaha kala duwan oo ku baxaysa afaf kala duwan.